मानिसलाई शृंगार गर्न र आफ्नो अनुहार हेर्न ऐना चाहिरहन्छ । त्यही ऐना जंगलमा बस्ने जनावरले देखेमा के होला ?
अरु जनावरलाई देखेर तत्कालै झम्टिने बाघले नै आफूलाई ऐनामा देख्दा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँला ? यसमा सबैको चासो हुन्छ ।
आईएफएस अधिकारी सुशान्ता नन्दाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा बाघदेखि चराचुरुङ्गीले ऐना हेरेका छन् ।
ऐनामा आफूलाई देख्दा जनावरले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने थाहा पाउन जंगलमा ऐना राखिएको थियो, त्यससँगै भिडियो रेकर्ड गर्ने क्यामेरा पनि । ऐना देख्दा जनावरले जनाउने प्रतिक्रिया भिडियोमा रेकर्ड भएको देखिन्छ ।
How animals perceive their looks in the mirror…
Mostly as competition. pic.twitter.com/WPKm4ZA4gW
दिल्लीपछि पञ्जाबमा सरकार बनाउन खोज्दै आप, अरविन्द केजरीवालको यस्तो घोषणा